Wararka - Tilmaamaha farsamada ee nidaamka ka-hortagga gaaska Quudinta iyo nidaamka Liquefaction iyo qaboojinta ee geeddi-socodka warshadda LNG
Nadaamka ka-hortagga gaaska quudinta
Habka habka loo doortay socodka geedi socodka eequudinta nidaamka ka-hortagga gaaskawuxuu leeyahay sifooyinka soo socda:
(1) Marka la barbar dhigo habka MEA, habka MDEA wuxuu leeyahay sifooyinka xumbo-xumada yar, daxalka yar iyo luminta aminiga oo yar.
(2) Cutubku wuxuu qaataa MDEA qoyan decarburization, mana jiro isticmaalka gaaska dib u soo kicinta.
(3) Bamka wareega ee MDEA waxa uu qaataa bamka dhexe ee hal-xawaare sare leh, kaas oo leh isku halaynta sare, isticmaalka tamarta yar iyo dayactirka yar.
(4) Xayeysiinta shaandhada molecular waxaa loo isticmaali karaa fuuq-bax qoto dheer, walina waxay leedahay sifooyin adsorption sare xitaa cadaadiska qayb ahaan uumiga biyaha hooseeyo.
(5) Isticmaalka kaarboonka firfircoon si aad uga saarto hydrocarbons culus waxay asal ahaan ka saari kartaa hydrocarbons caraf udgoon iyo C6 + hydrocarbons culus, si buuxda u xalliya dhibaatada heerkulka hoose ee qaboojinta iyo xannibaadda, iyo hubinta hawlgalka muddada dheer.
(6) Mercury waxay la falgashaa baaruud on sulfur-imregnated carbon activation si ay u soo saarto meerkuri sulfide, kaas oo lagu dhajiyay kaarboon firfircoon si loo gaaro ujeedada ka saarida meerkuriyada.Isticmaalka kaarboonka firfircoon ee sulfur impregnated si aad meesha uga saarto meerkurida waxay leedahay qiimo jaban.
(7) Qaybta shaandhada saxda ah waxay shaandhayn kartaa shaandhada molecular iyo boodhka kaarboon ee firfircoon ilaa 5 μm ee hoose.
Nidaamka dareeraha iyo qaboojinta
Habka loo doortay eehabka dareeraha iyo qaboojintawaa qaboojiye wareeg ah oo MRC (qaboojiye isku qasan), kaas oo lagu garto:
(1) Isticmaalka tamarta hoose.Habkani waxa uu leeyahay isticmaalka tamarta ugu hooseeya ee hababka qaboojiyaha ee inta badan la isticmaalo, taas oo ka dhigaysa qiimaha badeecada mid ku tartamaya suuqa.
(2) Nidaamka saami qaybsiga qaboojiyaha ayaa ilaa xad ka madax bannaan habka wareegga wareegga.Inta lagu jiro hawlgalka, nidaamka saami qaybsiga wuxuu buuxiyaa qaboojiyaha nidaamka wareegga wareegga si loo ilaaliyo xaaladda shaqada ee xasilloon ee habka wareegga wareegga;Ka dib marka cutubka la xiro, nidaamka saami qaybsiga wuxuu ku kaydin karaa qaboojiyaha qaybta cadaadiska sare ee nidaamka cadaadiska iyada oo aan la daadin qaboojiyaha.Ujeedada tan loo sameeyo: marka hore, badbaadi qaboojiyaha, iyo marka labaad, soo gaabin wakhtiga soo socda bilaabista.Wakhtiga bilawga ah ee unugga dareeraha ayaa ka yar 5 saacadood.
(3) Mugga iyo cadaadiska nidaamka qaboojiyaha waa in si macquul ah loo qaabeeyey.Ka dib marka cutubka la xiro, iyada oo la tixgelinayo in dhammaan qaboojiyaha lagu kululeeyo heerkulka caadiga ah iyo cadaadiska la isku dheelitiro, nidaamku wuxuu weli ka koobnaan karaa dhammaan qaboojiyaha, hubi in dhammaan qaybaha nidaamka aan la saarin oo la sii daayo, oo u oggolow qaboojiyaha inuu ku sii jiro qaboojiyaha. nidaamka muddo dheer.
(4) Dhammaan fiilooyinka unugga dareeraha heerkulka hooseeya waxaa la dejiyay meel ka baxsan sanduuqa qabow waxaana la alxanayaa si loo yareeyo dhibcaha daadinta loona fududeeyo dayactirka waalka.Ma jiro wax xidhiidh ah oo flange ah oo ku dhex jira sanduuqa qabow si loo yareeyo meelaha suurtogalka ah ee ka daadanaya sanduuqa qabowga.Heerkulbeegyo badan oo dhibco ah iyo baarayaal gaas ah ayaa loo habeeyey si loola socdo qulqulka suurtagalka ah ee sanduuqa qabow wakhtiga dhabta ah.
(5) Tiknoolajiyada horumarsan ayaa si weyn loogu isticmaalaa naqshadaynta sanduuqa qabow.Qaab-dhismeedka dhamaystiran, dhuumaha iyo falanqaynta cadaadiska deegaanka ayaa la samayn doonaa si loo hubiyo kalsoonida sanduuqa qabow ee tayada naqshadeynta.Marka hore, xirfadlaha 3D Design Software Solidworks waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso qaabka 3D ee sanduuqa qabow iyo qalabka dhuumaha;Kadibna, cosmos waxaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo walbahaarka jirku;Si loo daboolo naqshadda dabacsan ee dhuumaha heerkulka hooseeya, software falanqaynta cadaadiska dhuumaha xirfadleyda CAESAR II ayaa loo isticmaalaa falanqaynta cadaadiska tuubada;Markaad la kulanto dhibaatada furitaanka tuubada ama xitaa furitaanka weyn, si loo hubiyo in diiqada furitaanka ay ku jirto xadka la ogol yahay ee lagu qeexay heerka qaranka, ANSYS software ayaa loo isticmaali doonaa falanqaynta walaaca gudaha.Faahfaahinta ka eeg cutubka 14
Waqtiga boostada: Meey-09-2022